By Htet Wai Aung - November 30, 2016
ဇော်ဂျီနဲ့ဆို ၀ မရှိပဲ(မဟုတ်ပဲ) ဝိ လုပ်လို့ရတယ် (သုညနဲ့) Unicode နဲ့ဆို ၀ မရှိဘဲ ဝိ လုပ်လို့မရတော့ဘူး ဘယ်ဟာ ပိုကြိုက်လည်း ----------------------------------------------------- ကျမအပါအဝင် ဇော်ဂျီအသုံးပြုသူအချို့ဟာ ဝလုံး လို့ရေးချင်ရင် ဝလုံး ကိုလိုက်မရှာဘဲ သုည ကိုပဲ ဝလုံး အဖြစ်ရိုက်ထည့်လိုက်ကြတယ် (ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ကျမစိတ်ထဲ ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ ဝလုံး သီးသန့်ရှိမှန်းတောင်မသိဘူး တလောကမှ ကျမအကိုက နင်တင်တဲ့ status တွေမှာ ဝလုံး အစား သုည တွေရေးနေတာတွေ့တယ်တဲ့ ဘာဖြစ်လည်း တူတူပါပဲ ဆိုတော့ မတူဘူးတဲ့ ဝလုံး သက်သက်ရှိတယ် အိုင်တီကဆရာမဆိုတော့ မမှားသင့်ဘူးပေါ့ အဲလိုပြောတယ် ဒါပေမယ့် ခုထိ ဝလုံးရှာရမှာပျင်းလို့ သုညဘဲသုံးတယ် :) ) ဆိုလိုတာက ဇော်ဂျီမှာ ဝိ လို့ရေးချင်ရင် သုည လုံးကြီးတင် လည်း ဝိ ဖြစ်တာပဲ ဝလုံး လုံးကြီးတင် လည်း ဝိ ဖြစ်တာပဲ Unicode ကတော့ မရဘူး စည်းကမ်းကြီးတယ် ၀ မရှိဘဲ သုည ကို ဝိလုပ်လို့မရဘူး စည်းကမ်းတကျ သိမ်းပေးထားတော့ ပြန်စီရ ပြန်ရှာရလွယ်တာပေါ့ အဲဒါပါပဲ Credit Htar Htar Saw Lwin
အချို့က မေးတယ် Unicode ဆိုတော့ code ဆိုတာဘာကြီးလည်းတဲ့ စာမေးပွဲအဖြေလွှာစစ်တဲ့အခါ စာစစ်သူလက်ထဲ အဖြေလွှာကို ခုံနံပါတ်အတိုင်းမပေးဘဲ ခုံနံပါတ်ကိုဖြဲပြစ်ပြီး အဲဒီခုံနံပါတ်ရဲ့ code ကိုဘဲပေးလိုက်တယ် ဥပမာ ဘာသာရပ်တစ်ခုအတွက် ခုံအမှတ်က B.E. IT 1 ဆိုရင် သူ့အတွက် code ကို u 1000 လို့ပေးလိုက်တာမျိုးပေါ့ B.E. IT2ဆိုရင် u 1001 ပေ့ါ အဲဒီကုတ်တွေဟာ unique ဖြစ်နေရတယ် ဆိုလိုတာက code မထပ်ရဘူး စာစစ်ဌာနတစ်ခုမှာ code ၂ခု မထပ်ရဘူး unique code ဖြစ်ရမယ် Unicode ဆိုတာလည်း ဒီသဘောဘဲ ISO က မြန်မာ အက္ခရာ ကကြီးအတွက် code ကို 1000 လို့သတ်မှတ်ပေးထားတယ် ခကွေး အတွက် 1001 လို့သတ်မှတ်ပေးထားတယ် ကမ္ဘာမှာ ဘယ်သူမှ code နံပါတ် 1000 ကို သူုတို့အက္ခရာအဖြစ်ယူသုံးခွင့်မရှိဘူး မြန်မာ့မူပိုင် စစ်စစ် ဒါကြောင့် ဂုဏ်ယူစွားသုံးသင့်ပါတယ်လို့ ပုံမှာ တစ်ခုချင်းစီအတွက် code တွေပြထားတယ် မှတ်ချက် ချဲကွက်များမဟုတ်ပါ :) Credit Htar Htar Saw Lwin
By Htet Wai Aung - November 27, 2016
ပြည်ထောင်စု version 1.5 ကတော့ windows 7, Linux နဲ့ MacOS တွေအတွက်ပါ။ Download Regular Font Download Bold Font
ပြည်ထောင်စု ဖောင့် အသစ် (version 2.1)ပါ။ ပါဝင်​သော ဘာသာ​များ : ဗမာ, သက္က​တ/ပါဠိ, မွန်, ရှမ်း, စ​ကော​ကရင်, ပိုး​ကရင်(အနောက်​ပိုင်း), ပိုး​ကရင် (အရှေ့​ပိုင်း), ပ​အိုဝ်း, ကယား, အရှို​ချင်း, ပ​လေး​ပ​လောင်, ရူ​မာည်း​တ​အောင်း,ခန္တီး​ရှမ်း, Aiton & Phake, တိုင်း​လျမ်ခေါ်​ရှမ်း​နီ, ရွှေ​ပ​လောင်။ Download Regular Font Download Bold Font
ဟိုးတုန်းက ဖုန်းတွေပေါ် ကိုယ်တွေမြန်မာစာလေးမမြင်ရလို့ မြင်ရအောင်လုပ်ပီးဆို အထူးအဆန်း အောင်မြင်မှု တစ်ခုအနေနဲ့ပျော်ကြသည် ရွှင်ကြသည်ပေါ့ ဒီဖီလင်လေးက အခုထိရှိနေတုန်းပါဘဲ အခုအချိန်မှာလဲ အများသုံးနေတဲ့ ဇော်ဂျီပုံစံနဲ့ စာစီထားတဲ့ မြန်မာစာကို မြင်ရပီဆို အောင်မြင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ပျော်ရွှင်ကြရပါတယ်၊ အားလုံးလိုလိုကလဲ ဇော်ဂျီနဲ့ရေးတာဆိုတော့ စာတွေလဲမမှား အတည့်မြင်ကြတော့ ပျော်လိုက်တာမမှားပါဘူး ဒါပေမယ့် ဇော်ဂျီကပေးတဲ့ခဏတာပျော်ရွှင်မှုလေးနဲ့ လဲလိုက်ရတဲ့ ဘဝတာ နာကျင်မှုတွေဟာ မထင်မှတ်လောက်အောင် များပြားတယ်လို့ အမှန်တကယ်သိမြင်ချိန်မှာ ​ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဟာ ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်ခြင်းမလှ ကွယ်ပျောက်ပီး တကယ်တမ်းတော့ ထိတ်လန့်စရာပါလား စိုးရိမ်စရာပါလားဆိုတာ သိမြင်လာမှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါဘူး၊ ဒါနဲ့ဘဲ အများက ရင်နာနာနဲ့ ပျော်ရွှင်မချိပြုံးလေးဘဲ ပြုံးလိုက်ကြပါလိမ့်မယ်၊ ဟုတ်တယ်လေ ကူရာကယ်ရာမဲ့ ဘဝတွေကိုး အဲလောက်တောင်ဆိုးလား အဲဒီဆိုးတာထက်ပိုတယ်ဆိုတာဘဲဆိုတဲ့ အဖြေဘဲရှိပါတယ် ရရစ်တွေပို ယပင့်တွေပို အို ဒါလေးပိုတာများကွယ် ဒို့ကတော့ သည်းခံနိုင်တယ် စာလဲမှန်နေတာဘဲ သူဟာသူဘယ်လောက်ပိုပို
Zawgyi နဲ့ရေးထားတဲ့ epub တွေကို Unicode ပြောင်းဖို့အတွက် ကိုထိန်လင်းရွှေ (SaturnGod) ရဲ့ Rabbit Converter ပါ။ Windows, Linux , Mac စတဲ့ platform ၃ ခု လုံးကို Support လုပ်ပါတယ်။ Original post က http://blog.saturngod.net/news/rabbit-2 Download link https://github.com/saturngod/rabbit-epub-app/releases
ကွန်ပျူတာ Windows မှာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ယူနီကုဒ် Offline အဘိဓာန်ဖြစ်ပါတယ်... အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ ၊ မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် နှစ်မျိုးသံုးလို့ရအောင် စီစဉ်ထားပါတယ်.. မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်းကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပါတယ်... ဇော်ဂျီနဲ့ ဖိုင်တွေဖိုဒါတွေကိုနာမည်ပေးထားပြီးမှ ယူနီကုဒ်ပြန်ပြောင်းချင်သူတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေအောင် Filename changer + Myanmar NLPက ရေးထားတဲ့ ကနောင် Offline converter ကိုလည်း All in one အသံုးပြုနိုင်အောင်ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်... စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကြမ်းကိုတော့ ကိုပီကေဝက်ဆိုဒ်ကရော ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ် မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကြမ်းနှင့်ခွဲထား ထဲကရော မှီငြမ်းထားပါတယ်.. အခက်အခဲများရှိပါကလည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်.. အကြံပြုချက်များကိုလည်း အားရဝမ်းသာစွာ မဟားတရား လက်ခံပါတယ် :D :D by, Kyi Thar Soe System requirements =================== Windows .Net Framework 4.5 Download link : https://app.box.com/s/9t2izsdo6h04t74advgjehgtk03cf1qu မြန်မာလိုတွေအားလုံးပေါ်နေဖို့အတွက်တော့ .. Windows XP >> Desktop >> Right Click >> Properties>> Appearance Tab >>
Dear Zawgyi user !! Please read this instructions and you will be OK with Unicode in Windows Operating System. မင်္ဂလာပါ ဇော်ဂျီအသုံးပြုသူများ သင့်အနေဖြင့် ဝင်းဒိုးတွင် ယူနီကုဒ် အသုံးပြုချင်လျှင် အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ.. သင်အဆင်ပြေ အိုကေသွားပါလိမ့်မည်.. ========================================= Windows မှာ မြန်မာယူနီကုတ် ကို အသုံးပြုချင်သူများအတွက် နည်းလမ်းများနဲ့ အမှန်မထင် ကြုံတွေ့လေ့ရှိတဲ့ အခက်အခဲများကို အောက်မှာ လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်... အခက်အခဲရှိရင် phoehtt@gmail.com သို့email ပို့မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း .... Windows မှာ မြန်မာယူနီကုဒ် ထည့်နည်းနှင့် ထည့်တဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်တတ်သော အခက်အခဲများ။ ------------------------ Windows မှာ ယူနီကုဒ် ထဲ့သွင်းရတာ အလွယ်ကူဆုံးပါ။ ၁။ ယူနီကုဒ်ဖောင့် တခုခုကို ဒေါင်းပြီး install လုပ်ပါ။ ----------------------- အောက်ဖော်ပြပါ ဖောင့်များသည် Unicode စံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အပြည့်အဝလိုက်နာသော ဖောင့်များဖြစ်သဖြင့် မိမိစက်အတွင်း ၎င်းဖောင့်များတစ်ခုခုရှိနေရုံမျှဖြင့် မည်သည့် Unicode စာသားများကိုမဆို ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်... (က) (Pyid
MM Font Converter for Mac new version - bug fixes - Yosemite support :3 https://drive.google.com/open?id=0BzVqrJ2Yq_yLdy1vbGw4OHJqYk0 By Myat Min Soe
By Htet Wai Aung - November 03, 2016
#Pyidaungsu-2.0 (Regular, Bold) Windows 8, 10 မှာရတယ် Offices 2016 (Windows version) setting မပြင်ဘဲ တန်းသုံးလို့ရတယ်။ iOS 10 လည်းရတယ်ပြောတယ် (ကိုခွန်မောင်မောင်) Myanmar3 ထက်မကျဲတော့ပါ width ကိုညှိထားပါတယ်။ #ZawDecode (Regular, Bold) PC size PC သုံး ပုံမှန်အရွယ်အစား ဖြစ်ပါတယ်။ #ZawDecode (Regular, Bold) iOS size iOS မှာအသုံးပြုရန် အရွယ်အစားကို သေးငယ်အောင်လုပ်ထားလို့ ခြေပြတ် ခေါင်းပြတ်မဖြစ်တော့ပါ။ #Pyidaungsu-1.3 (Regular) OS အားလုံးရပါတယ်။ Offices 2016 (Mac version) မှာမရပါဘူး။ #Pyidaungsu-1.3 (Regular) iOS size အရွယ်အစားသေးထားပါတယ်။ #Pyidaungsu-1.4 (Regular, Bold) ကတော့ လုပ်နေတုန်းပါ Mac နှင့် Offices 2016 (Mac) ပါရအောင် လုပ်နေပါတယ်။ ရရင် စမ်းပေးကြပါဦး။ Download link GitHub.com/ mcfnlp
မြန်မာသရ ၁၁ လုံး အ၊အာ၊ဣ၊ဤ၊ဥ၊ဦ၊ဧ၊အဲ၊ဩ၊ဪ၊အို သရရေးနည်း ၂ မျိုး စာပေအရေးအသား၏ အခြေခံမှာ သရနှင့်ဗျည်းများဖြစ်ကြသည်။ ထိုသရနှင့် ဗျည်းတို့ အမျိုးမျိုးပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ဝေါဟာရများစွာ ရရှိသည်။ ထိုသို့ပေါင်းစပ်ရာတွင် (၁)အရှည်ရေးနည်းနှင့် (၂) အတိုရေးနည်း ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိရာ မြန်မာတို့က အတိုရေးနည်းကိုသာ လက်ခံအသုံးပြုကြသည်။ အရှည်ရေးနည်း အရှည်ရေးနည်းမှာ ဗျည်းနှင့် သရကို ရှေ့နောက်စဉ်၍ရေးခြင်းဖြစ်သည်။ အမြင်အားဖြင့် ရှင်းပြီး လုံးချင်းသရ ဗျည်းယှဉ်သရဟူ၍ နှစ်မျိုးတီထွင်ရန် မလိုအပ်ပေ။ ဥပမာ- အင်္ဂလိပ်ဘာသာသည် အရှည်ရေးနည်း ဖြစ်သည်။ mAUng mAUng gOEs tO schOOl. (သရများကို အကြီးဖြင့် ရေးထားသည်) အတိုရေးနည်း မြန်မာအက္ခရာတို့၏ ဘိုးဘေးများဖြစ်သော ဗြဟ္မီအက္ခရာပွားများသည် အတိုရေးနည်းကို အသုံးပြုကြသည်။ အတိုရေးနည်းတွင် ဗျည်းနှင့် သရတို့ကို တစ်တန်းတည်းစဉ်မရေးဘဲ အထက်အောက် ရှေ့နောက် ကြားညှပ်၍ အမျိုးမျိုးရေးကြသည်။ ထိုသို့ရေးရန် ဗျည်းယှဉ်သင်္ကေတများ တီထွင်ရသည်။ မြန်မာစာရေးနည်းသည် အတိုရေးနည်းဖြစ်သည်။ မြန်မာသရများတွင် ရေးနည်း ၂ မျိုး ရှိပါသည်။ (၁) လုံးချင်းသရရေးနည်းနှင့် (၂) ဗျည်းယှဉ်သရ (သင်္ကေတ) ရေးနည်းတ
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ မြန်မာစာ ဖတ်မရဘူးလို့ ဆိုရင် အီးမေးလ်၊ ဖေ့စ်ဘွတ် သုံးသူအားလုံးနီးနီး တစ်သံထဲ ထွက်တယ်။ “ဇော်ဂျီဖောင့်ကို ဒေါင်းလုဒ်လိုက်” ဆိုတာပါပဲ။ ဒါဆို အင်္ဂလိပ်စာ ဖတ်မရဘူး ဆိုရင်ကော? မရှိ၊ မကြားဖူးဘူးလို့ ဆိုကြလိမ့်မယ်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ ကွန်ပျူတာ တီထွင်ကတည်းက operating systemကို ရိုမန် အက္ခရာများနဲ့ ရေးသား တည်ဆောက်ခဲ့ကြလို့ ဖြစ်တယ်။ ထို့ကြောင့် ကွန်ပျူတာ တစ်လုံး သုံးစွဲသူလက်ထဲ ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာလည်း အင်္ဂလိပ်စာဟာ ပင်မ ဘာသာရပ် တစ်ခုအဖြစ် ပါလာတယ်။ နည်းပညာ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ အင်္ဂလိပ်စာကို ပထမ ဘာသာစကားအဖြစ် အသုံးမပြုသော နိုင်ငံများအတွက် ကွန်ပျူတာ OS တီထွင် ဖန်တီးသော နည်းပညာရှင်များမှ နိုင်ငံ၊ ဒေသအလိုက် အသုံးပြုသော ဘာသာစကားများကို ကွန်ပျူတာ OSပေါ်၌ အသုံးပြုနိုင်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ အကျဉ်းချုံး ဆိုရလျှင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဘာသာစကားမျိုးစုံကို လူ မဟုတ်သည့် ကွန်ပျူတာ OSမှ နားလည်နိုင်ဖို့အတွက် ပညာရှင်များက Unicodeလို့ လူသိများတဲ့ စံနှုန်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့ကြတယ်။ ထိုစံနှုန်းကို လက်ခံ မှီဝဲပြီး ကမ္ဘာ့ လူဦးရေ အများဆုံး နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ China, Indiaလို နိုင်ငံမျိုးမှအစ သိန်းဂဏန်းသာ
By Htet Wai Aung - November 01, 2016
ပ န်ဂရမ်ဆိုသည်မှာ ဘာသာစကားတစ်ခုတွင်ပါဝင်သော အက္ခရာများအားလုံး ထည့်သွင်းရေးဖွဲ့ထားသော ဝါကျကို ခေါ်သည်။ ဥပမာ အင်္ဂလိပ်စာတွင် - A quick brown fox jumps over the lazy dog. သည် လူသိများသော ပန်ဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပန်ဂရမ်များကို စာရိုက်လေ့ကျင့်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ ဖောင့်တစ်လုံး၏ နမူနာပုံစံများကို ဖော်ပြရန်ဖြစ်စေ သုံးလေ့ရှိသည်။ မြန်မာစာအတွက် ပန်ဂရမ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ သီဟိုဠ်မှဉာဏ်ကြီးရှင်သည်အာယုဝဍ္ဎနဆေးညွှန်းစာကိုဇလွန်ဈေးဘေးဗာဒံပင်ထက်အဓိဋ္ဌာန်လျက်ဂဃနဏဖတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပန်ဂရမ်သည် ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာလတွင် www.myanmaritpro.com က ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည့် မြန်မာပန်ဂရမ်ပြိုင်ပွဲမှ ထွက်ပေါ်လာသော ပန်ဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲကို Solveware Solution မှ CEO ဦးငွေထွန်းက ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီး မောင်⁠မောင်ဆန်းက တီထွင်ရေးသားခဲ့သည်။ <ကိုမောင်ဆန်း၏ ယူနီကုဒ်စာအုပ်မှ>